Qarax ka dhacay Muqdisho iyo ganacsade Caan ahaa oo lagu dilay. | XAL DOON
Home NEWS Qarax ka dhacay Muqdisho iyo ganacsade Caan ahaa oo lagu dilay.
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo ganacsade Caan ahaa oo lagu dilay.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in fiidkii hore ee xalay uu qarax xooggan ka dhacay Isgoyska Baar Ubax, halkaasoo lagu dilay Cali Macalin Maxamed (Cali Neero).
Ninka la dilay oo ahaa ganacsade caan ka ah Caasimadda, ayaa u geeriyooday dhaawac daran oo ka soo gaaray qarax Miino oo gaarigiisa loogu xiray, iyadoo dhaawiciisa la geeyay Isbitaalka weyn ee Digfeer oo ku yaala degmada Hodan.
Cali Macalin Maxamed (Cali Neero) waxa uu ka mid ahaa ganacsatada Magaalada Muqdisho ku iibisa ugaarta laga keeno Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo weerarkan ay ka badbaaday xaaskiisa oo gaariga la saarneyd.
Ciidamada amaanka ee dowladda ayaa durba tagay halka qaraxa uu ka dhacay, iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgallo baaritaana ah, wallow aan la soo sheegin cid ay weerarkan u soo qabteen, wallow ay wadaan baaritaanada halka gaariga qaraxa looga soo xiray.
Shabaab ayaa looga bartay iney fuliso qaraxyada gawaarida shaqsiyaadka loogu xiro, iyadoo ganacsatada ku soo rogta canshuuro xad dhaaf ah, iyagoo kuwii diidana siyaabooyin kala duwan u dila.